आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक कुरा गर्न गइरहेका छौँ । आज हाम्रो बीचमा देशका सफल प्रधानमन्त्री, कुशल राजनेता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँलाई म ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु !
– पार्टी एउटा जिवन्त संगठन हो । त्यसमा विचारका बहस, छलफल कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका दृष्टिकोणहरु आइरहन सक्दछन् । र, गरिएका कामहरुको सम्बन्धमा कहींकतै कमीकमजोरी भयो कि भन्ने समीक्षात्मक कुराहरु आइरहन्छन् । प्रश्न कति हो भने, कति समसामयिक छन्, कति सान्दर्भिक छन्, कति आवश्यक छन्, कति उचित छन् ? हामीले हेर्नु पर्ने कुरा यो हो । र, कति विधि सम्मत र कति जनता र देशका हितका निम्ति भएर आएका छन् भन्ने हो । तसर्थः कुनै पनि भिन्न विचारहरु, अभिमतहरु र रायहरु प्रकट हुनसक्ने छैनन्, सक्दैनन भन्ने होइन, हुन सक्छन् । तर ती कति स्वस्थ छन् भन्ने कुरा हो । तिनलाई स्वस्थतातिर लैजानुपर्छ ।
अहिले दुई अध्यक्ष प्रचण्डजी र म, जुन कतिपय समस्याहरु देखा परे, बीचमा कतिपय अस्वस्थताहरु पनि देखा परे र अलिक जग हसाइका कामहरु पनि विभिन्न कारणले भए । हाललाई त्यसमा को दोषी, को निर्दोष त्यो करार गर्नेतिर भन्दा समीक्षा गर्दै जाउँला । हामी हरेकले आत्माआलोचक भएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, कसैलाई दोषारोपण गर्नेभन्दा र एकताको बाटोतिर फर्कौं भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं । र, उहाँ र मैले एकताबद्ध ढंगले पार्टीलाई अगाडि बढाउँदै लिएर जान, एकता एकीकरणको प्रक्रिया टुंग्याउन, देशमा स्थिरता–स्थायित्व कायम गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन, कोभिड १९ सँग प्रभावकारी ढंगले लड्न, अहिले देखा परिरहेका प्राकृतिक विपत्तिहरुसँग लड्न र सरकारका नियमित कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन हामी एकताबद्ध भएर अगाडि जाने भन्ने सहमति गर्‍यौं । त्यस सहमतिलाई कसरी अगाडि जाने त ? त्यसका आधारहरु कस्ता हुन सक्छन् ? हामीले आफ्ना रायहरु पनि बनायौं । र, ती रायहरुलाई व्यवस्थित गर्न हामीले कार्यदल गठन गर्‍यौं र हामीलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि खासगरी दुई अध्यक्षलाई एकताका यी प्रयासहरुमा सचिवालय र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावहरु तयार गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने ? यो फाटोतर्फको प्रयास होइन, यात्रा होइन । एकता र मिलनतर्फको यात्रा, सकारात्मक बाटोतिरको यात्रा कसरी अगाडि बढाउने त ? भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव गर्न कार्यदल बनायौं । कार्यदलले मेहनतपूर्वक आपूmले प्रस्ताव तयार ग¥यो । अनि हामी दुई अध्यक्षलाई दियो र हामी छिट्टै नै सचिवालयको बैठकबाट यसलाई आवश्यक परे परिमार्जनसहित नत्र जस्तो छ यस्तै अथवा जुन रुपमा हुन्छ, त्यसले जसरी अगाडि बढाउँछ र सम्भव भए हामी स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्छौं । कोभिड–१९ को महामारी फैलिँदो छ । यस्तो अवस्थामा कुनै हेल्च्क्राइ वा जबरजस्ती गर्न सकिदैन । त्यस्तो भयो भने हामी सचिवालयबाट टुंग्याएर बस्न सम्भव भएको बेला स्थायी कमिटीबाट त्यस निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने काम गर्दै अगाडि बढ्छौं ।
– पार्टीको सरकार हो । पार्टीले नीतिगत ढंगले सरकार चलाउँछ, तर सबै गर्दैन । नत्र मन्त्रिपरिषद् किन चाहियो त ? पार्टीको स्थायी कमिटी सचिवालय भए भएन ? मन्त्रिपरिषद् किन चाहियो त ? अनि पार्टी अध्यक्ष भए भइहाल्यो, प्रधानमन्त्री किन चाहियो ? प्रधानमन्त्री एकजना हुन्छ । अध्यक्ष मण्डल पार्टीमा बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री मण्डल बन्दैन । अध्यक्षद्वय बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीद्वय हुँदैन । राष्ट्रपतिद्वय हुँदैन । त्यसकारण पहिलो त हामीले सिस्टम बुझ्नु प¥यो । पहिले सिस्टम अफ गर्भनेन्स् के हो भनेर बुझ्नु पर्‍यो । निर्णय कहाँबाट हुन्छ र कसरी हुन्छ ? यस प्रणालीमा त्यो थाहा पाउनु पर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्छ । सबैका कुरा सुन्छ । राय लिन्छ । बाहिर बुद्धिजीबीहरुसँग लिन्छ । सरोकारवालाहरुसँग लिन्छ । स्टेकहोल्डरहरुसँग लिन्छ । परामर्श थुप्रैसँग लिन्छ । मैले परामर्श अरु दलहरुसँग लिने गरेको छु । प्रतिपक्षी दलहरुसँग लिने गरेको छु । अरुसँग पनि लिने गरेको छु । र, ती सबै कुराहरुलाई लिएर फेरि पार्टीमा परामर्श गर्ने गरेको छु, छलफल गर्ने गरेको छु । अब सरकार र पार्टी एउटै होइन । त्यहाँनेर भिन्नता छ । त्यस भिन्नताअनुसार चल्छ । यो कुरा हामीले थाहा पाएर नै अगाडि बढ्नु पर्छ ।
अब आश्चार्य लाग्दोगरी जसले जे पायो त्यहीँ बोल्ने गरिएको छ । यो बेथिति रोक्नु पर्छ । पहिले बुझ्नु पर्‍यो, थाहा पाउनु पर्‍यो यो परिपाटी होइन र हुन सक्दैन । थाहा नपाइकन बोल्ने कुरा उचित पनि होइन । मेरो विचारमा यसमा आज बहस चलाएर समय खेल फाल्नु पनि जरुरी छैन । कतिपय अभ्यास नभएका साथीहरु, अनुभव नगरेका साथीहरुले यो अभ्यासलाई सिक्दै जाने कुरा हो, जसमा अनुभव वा ज्ञानको कमी छ !
– पहिलो त, यो प्रतिवेदन के हो भन्ने कुरा बुझ्नु प¥यो । यो पार्टीको विचारधारात्मक दस्तावेज वा महाधिवेशनको प्रतिवेदन होइन । यसलाई पास त किन गर्न नसक्नु ? पास त सबै ठाउँमा हुन्छ । तर यो त्यसरी पास गर्नुपर्ने प्रतिवेदन होइन । यो अहिलेको समस्या समाधानको लागि, अहिले जुन समस्या अनावश्यक ढंगले देखा परे । यस्तो समस्या देखा नपर्नु पर्दथ्यो, यो दुःखद पक्ष हो । यस्तो समस्या देखा पर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । तर व्यक्तिगत कारणहरु होलान् व्यक्तिका आकङ्क्षाका प्रश्नहरु होलान । आकङ्क्षाका प्रश्नहरुलाई पार्टी र सरकार संचालनका प्रश्नहरुसँग जोडेर त्यहाँ व्यवधान पुग्नेगरी देशको कार्य संचालन, सरकार संचालन वा सिंगै पार्टी संचालन र एकताको प्रक्रियामा व्यवधान पुग्नेगरी आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षालाई बढी महत्व दिएर त्यस्ता राष्ट्रिय प्रश्नहरुमा, राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा, जनसरोकारका विषयहरुमा र आम जनताका हितका विषयहरुमा कुनै प्रकारको व्यवधान पुग्नेगरी कोहीपनि चल्नुहुँदैन । प्रश्न यो हो ।
– यो एकता गरेको एकछिनका लागि मात्रै होइन । यो एकता अलिपरसम्म जाउँ अनि आआफ्नो बाटो लागौंला भनेर पनि गरिएको होइन । यस देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि गरिएको थियो । मैले आफ्नो भनाइ राख्न सक्छु, यस देशमा अग्रगामी परिवर्तनको गतिलाई निरन्तरता दिन, यहाँ स्वच्छता, पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्दै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निमूर्लन गर्दै, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै, विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै अगाडि जान यो आवश्यक ठानिएको हो । देश बनाउनका निम्ति स्थायित्व र स्थिरता चाहिन्छ । त्यसका निम्ति ६ वा ९ महिने सरकार होइन । एक निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्मको पाँच वर्ष अवधिको लागि सुस्थिर सरकार चाहिन्छ । अर्को, त्यसमा पनि नीतिगत रुपमा अझ उत्तरदायित्वका प्र्रश्नमा त्यो निरन्तरता होस् भन्ने कुरा, त्यसको सुनिश्चितता गर्न राम्रो बहुमत चाहिन्छ । यसर्थः यो एकता एकछिनको लागि गरिएको वा अलि परसम्मकोे यात्राका लागि गरिएको होइन । यो देशलाई पछौंटेपनबाट अगाडि बढाएर विकासित देश बनाउने उद्देश्यका साथ, बिकृतिहरु हटाएर बिकृतिरहित एउटा सुसभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्न, अशिक्षा हटाएर सुशिक्षित नागरिकहरुको देश बनाउन र रोगब्याधी हटाएर निरोगी नेपाल निर्माण गर्न हो । यी तमाम् उद्देश्यहरुका साथ चौतर्फी विकास, अनेक क्षेत्रको तीब्र विकासलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ अघि बढ्न वा यी उद्देश्यहरु पूरा गर्न स्थायित्व र स्थिरता चाहिन्छ । त्यसका निम्ति सुदृढ सरकार चाहिन्छ । यस बाटोमा जानको लागि हामीले एकताको यो अभियान थालेका हौं । त्यसकारण यस बीचमा सरकारकोे आलोचना गर्ने, निराधार आलोचना गर्ने कुराहरु जो भए, ती हुनुहुदैनथ्यो । अरु विरोधीहरुले त विरोध गर्नुलाई आफ्नो धर्म ठान्नेहरु पनि छन्, जो गलत हो । सही कामको विरोध गर्नु, सही कामको चर्चा नगर्नु, सही काम देख्दै नदेखेजस्तो गर्नु, सही कामभित्र पनि खोट लगाउन खोज्नु र आलोचना गर्नु यो देशप्रतिको इमान्दार अभ्यास हो भनेर भन्न सकिदैँन । देशप्रतिको इमान्दार अभ्यास भनेको गल्तीलाई गल्ती भन्नु, सहीलाई सही भन्नु हो । जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ, जसरी पनि अलोकप्रिय बनाउने कोशिस गर्नुपर्छ भन्ने, यद्यपि ती कोशिसहरु काम लाग्दैनन्, ती पराजित हुन्छन् । तरपनि अरुले त्यो गर्ने नै भए । तर, आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि समर्थनमा एक शब्द नबोलिनु, विरोधमा कुरा उछालिनु, कसैकसैले अलिक कम बोल्नु, तर समर्थनमा चाहिँ बोल्दै नबोल्नु र भित्रभित्रै विरोध संगठित गर्नुजस्ता कुराहरुचाहिँ उचित हुँदैनन् । यो परिपाटीको हामीले अन्त्य गर्नैपर्छ । यसरी अन्त्य गर्नका लागि एकताको भावनाका साथ काम गर्नुपर्छ । र, एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ । महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्छ । महाधिवेशनले नै त्यसउपरान्तका पार्टीका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरुलाई निर्देशित गर्ने उपयुक्त निर्णयहरु गर्नुपर्छ ।
अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन चैतमा हुने भनेर भनिएको छ । त्यो कति समभव छ, हेर्न बाँकी छ । किनभने, कोरोनाको कहर कसरी अगाडि बढ्छ ? त्यसपछि मात्रै एउटा निर्णय होला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू । अहिलेको अवस्थामा तपाईं र प्रचण्डको बीचमा सहमतिकै साथ अगाडि जाने एउटा सहमति भएको छ । हस्ताक्षर तपाईं दुबै अध्यक्षले गर्नुभएको छ । पार्टीको महाधिवेशनपछि नेतृत्वको चयन पनि सहमतिकै आधारमा हुन्छ ? महाधिवेशनपछि प्रचण्ड नै अध्यक्ष बन्नुहुन्छ पार्टीको कि तपाईँ बन्नुहुन्छ फेरि पनि ?
– सबैको बीचमा हुन्छ ।
– अहिले त्यस विषयमा नजाऔं । त्यस विषयमा जाँदा थप विवादका कुराहरु निस्किने समभावना हुन्छ । फेरि मैले के पाउँछु त भन्नेका कुराहरु सुरु हुन सक्छन् । त्यसकारण महाधिवेशनमा कसले के पाउँछ भन्ने कुरा महाधिवेशनलाईनै सुम्पिदिऔं । महाधिवेशनलाई नै जिम्मा लगाऔं । महाधिवेशनले विवेकसम्मत र उपयुक्त निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास गरौं । महाधिवेशनले एकताको पक्षमा योगदान गर्छ भन्ने विश्वास गरौं । महाधिवेशले अनेकताको लागि खेती गर्छ भन्ने विश्वास नगरौं । एकताको पक्षमा नै महाधिवेशनले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने नै विश्वास गरौं । सही नीति निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँछ भन्नेमा विश्वास गरौं । सही संरचना तयार गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरौं । उपयुक्त पात्रहरुको छनोट गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरौं । महाधिवेशन सर्वोच्च थलो भएको हुनाले हामीले सर्वोच्च विश्वास त्यसमाथि नै राख्नु पर्दछ ।
अब अर्थमन्त्री परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन । सबैको ध्यान डा.युवराज खतिवडातिर छ । तपाईं पाँच वर्ष अर्थमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँलाई ? सांसद पद सकिएपछि पनि करिब छ महिना अर्थमन्त्री बन्नुभयो । त्योभन्दा बढी उहाँलाई संविधानले अधिकार दिएको छैन,मन्त्री बन्नको लागि, फेरि पनि उहाँलाई तपाईं दोहोर्‍याउँदै हुनुहुन्छ, सांसद बनाउँदै हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ?
– छैन । तर, के हुन सक्छ भने मैले अघि नै भने मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्ने भनेको यो एकदम स्थिरता र स्थायित्वसँग जोडिएको कुरा होइन । मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भएर स्थायित्व र स्थिरतामा तलमाथि पर्ने कुरा होइन र हुँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई आफूले यस पाँच वर्षको कार्यकालमा दिने परिणामहरु कसरी प्रभावकारी हुन सक्छन् ? काम कसरी प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढ्छन् ? यस कुरालाई जाँच्ने हो । यदि मेरो नजरमा डा.युवराज खतिवडाभन्दा अर्को अर्थमन्त्रीले रााम्रो गर्ला कि त भन्ने अपेक्षा भयो भने उसलाई जिम्मा दिन पनि सकिन्छ । डा.युवराज खतिवडाबाट राम्रो हुन्छ भन्ने लागेमा त्यसो पनि हुन सक्छ । अथवा कहिलेकाहीँ राजनीतिमा विभिन्न कारणहरुले अर्थ राख्न पनि सक्छन् । त्यस्तो पनि हुनसक्छ । तर, यो मुख्य रुपमा प्रधानमन्त्रीले आपूmलाई आफ्नो कामलाई सफल बनाउनको निम्ति मन्त्रिपरिषद्को हिसाबमा त्यसको अरु पक्ष के छ ? तिनीहरु सबै पक्ष केलाएर कसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? समग्रतामा निष्कर्ष के निस्किन्छ ? परिणाम के आउँछ ? त्यसलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो । टुंगो गर्ने हो र अगाडि बढ्ने हो ।
वामदेव गौतमलाई तपाईले विशेष जिम्मेवारी दिदै हुनुहुन्छ भनेर नेपाली राजनीतिमा चर्चा, परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू । तपाईँ राम्रोसँग अध्ययन गरेको, बुझेको राजनेता हो । उहाँले कुनै जिम्मेवारी पाउँदै हुनुहुन्छ ? राष्ट्रिय सभामा लिएर जादैँ हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ? त्यो समभावना छ ?
– नेपालमा मात्रै यस्तो हुन्थ्यो भने त विरोधीहरु चम्किएर बस्नुखानु हुँदैनथ्यो । तर यो विश्वव्यापी रुपमा, महामारीको रुपमा आएको अत्यन्तै घातक र संक्रामक रोग कोभिड–१९, जसले मानव जातिको भविष्यलाई हल्लाइदिएको छ । आज मानव जीवनलाई थर्कमान बनाएको छ । आज अर्थतन्त्रलाई बहुतै गम्भीर समस्यामा हालेको छ । र, यसले भविष्यमा कस्तो रुप लिन्छ ? त्यो अझैं टुंगो लागिसकेको छैन । यसको समाधान कहिलेसम्म हुन्छ ? यो अझै टुंगो लागिसकेको छैन । जनतामा सचेतनता जगाउने कुरामा जोड दिन छाडेर यहाँ काम गरिरहेका व्यक्तिहरु परिवर्तन गरी केही हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने हाम्रो जनताको चेतनाको स्तर के छ ? सरकारले जे कदमहरु जे चालिराखेको छ, ती सरकारका लागि चालिराखेको छ कि आफ्नो जीवन रक्षाका लागि हो ? जनताले यति बुझेका छन् । एउटा हिस्सा छ त्यस्तो बहस गर्न रुचाउने पनि छ । तर सबैले त्यस्तो ठानेका छैनन् । एउटा हिस्साले चाहिँ आफ्नो लागि सरकारले यो सारा गरिरहेको छ भन्ने कुरासम्म बुझिराखेको छैन । सरकारका प्रयासहरु केही पनि नभएको, तयारी केही पनि नभएको ठाउँमा अहिले हामी २३/२४ हजार पीसीआर टेस्ट प्रतिदिन गर्न सक्छौं, यो सानो कुरा होइन ।
– किन परिणाम जनताले पाएका छैनन् ? सरकारले यति व्यवस्था नगरेको भए त भयावह स्थिति उहिले नै भइसक्नेथियो । यो त बढेर आतंकको एउटा भयानक रुपमा परिसक्दथ्यो । कति जनाको ज्यान जान्थ्यो ? अहिले कति सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ ? कति सेनालाई ? कति प्रहरीलाई ? कति सशस्त्र प्रहरीलाई ? कति स्वास्थ्यकर्मीलाई ? कति डक्टरलाई ? कति नर्सलाई ? उनीहरु चुप्प लागेर घरमै बसेको भए त कोरोना सर्दैनथ्यो होला नि ! उनीहरु त आपूm एक्सपोज भएर उपचार दिँदाखेरी आफ्नो ज्यान नै खतरामा परेको छ । अनि आपूm उपचार दिँदा ज्यान खतरामा पारेर, आफ्नो ज्यान गुमाएर उपचारमा संलग्न हुनेहरुप्रति कृतज्ञ हुनुपर्दैन ? अनि सरकारले केही पनि गरेन ? सेनाले के रहरले त्यहाँ गएर आफूलाई संक्रमण गराएर फर्किएको हो त ? प्रहरीले त्यहाँ संक्रमण गराएको किन हो ? सडकमा यस्तो घाम, यस्तो पानी दुईवटै अवस्थामा सडकमा तपाईंले प्रहरी देख्नुभएको छ, त्यस ठाउँमा आपूm उभिनु परेको भए के हुन्थ्यो ? जुनसुकै जोखिम मोलेर सेना प्रहरीले काम गरिराखेका छन् । त्यो काम देख्नुपर्दैन ? अनि सरकारले केही पनि गरेन ? सरकार भनेको के हो त ? कर्मचारीहरु खटिराखेका छन्, यस्तो अवस्थामा सेवा प्रवाह गरिराखेका छन्, यस्तो अवस्थामा सेना खटिराखेको छ, प्रहरी खटिराखेको छ, सशस्त्र प्रहरी खटिराखेको छ, कर्मचारी खटिराखेका छन्, डाक्टर खटिराखेका छन्, नर्सहरु खटिराखेका छन्, स्वास्थ्यकर्मी खटिराखेका छन् । दिन भनेका छैनन्, रात भनेका छैनन्, निन्द्रा भनेका छैनन्, भोक भनेका छैनन्, शून्यप्रायः स्थितिबाट दैनिक २३ हजार टेस्ट हुनसक्ने क्षमता र पूर्वाधार बनाइएको छ । कुनै पोजिटिभ केस पाइयो भने कोसँग सम्पर्क थियो भनेर टे«सिङ हुन्छ, खोजी हुन्छ । कोसँग सम्पर्क भएको थियो, त्यहाँसम्म गएर फेरि ट्रेसिङ गरी खोजी गरेर स्वाव टेस्ट गरीगरी बिमारी छ कि छैन भनेर हेरिएको छ । संक्रमण फैलिन नपाओस् भनेर यस्ता विधिहरु अपनाइएको छ ।
– आइस नै जमेको थिएन के को ब्रेक हुनु ! आइस जमेको भए बे्रक हुन्थ्यो । मानिसहरुलाई के प¥यो भने यो हाम्रो भूमि जो सुगौली सन्धिले काली अर्थात् महाकालीपूर्वको जमिन हाम्रो जमिन हो भनेर तोकेको छ छुट्याएको छ । सन् १८१६ देखि १९६२ सम्म १४६ वर्ष त्यो जमिनको हामीले भोगचलन पनि गर्‍यौं । यातायात थिएन, संचार थिएन, त्यस्तो बेला, त्यस्तो जमानामा हामीले भारत–चीन युद्धका बेलासम्म निरन्तर भोगचलन गर्‍यौं । भारतले चीनसँगको युद्धका बेला कालापानीमा फौज राखेछ । त्यो धेरै पछि मात्रै नेपाललाई थाहा भयो । किनभने, यातायात थिएन । संचार पनि थिएन । मिलिट्रीको संचार थियो भनेपनि उहाँहरुको मिलिट्री त्यहाँ बसेको थियो । हामीलाई थाहा भएन । त्यसकारण २०२६ सालमा उत्तरी चेकपोष्टमा, चेकपोष्ट भनेर हाम्रो उत्तरी सीमानामा भारतले मातृकाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा जुन सम्झौता गरेर १७ वटा चेकपोष्ट खडा गरिएको थियो, मिलिट्री चेकपोष्ट उत्तरी सीमानामा यसरी राखिनु एउटा लज्जाजनक कुरा थियो । हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको लागि त्यो लज्जाजनक कुरा थियो । त्यस विषयमा कुरा उठाइयो र २०२६ सालमा ती चेकपोष्ट फिर्ता गए । त्यसबेला कालापानीको चर्चा कसैले पनि गरेन । चर्चा नगरेको हुनाले रह्यो, नत्र ती १७ वटा २००८ सालमा राखिएको थियो भनेँ त्यसभन्दा पछि राखिएको यो २०२६ सालमा अरु फिर्ता गर्दा भर्खरै राखिएको बाँकी रहनुपर्ने हुदैनथ्यो । यो फिर्ता गर्न धेरै गाह्रो थिएन । सन् १९५२ मा राखिएको सकियो फिर्ता गर्न भने ५२ मा राखेको सकियो फिर्ता गर्न भने १९६२ मा राखिएको नसक्ने त कुरा थिएन, सकिन्थ्यो नै । तर, त्यसबेला यो कुरै उठेन । त्यसकारण १७ वटा पोष्ट फिर्ता भए, एउटा बाँकी रह्यो । यो भूभागको विवाद कुनै आवेश, उत्तेजना र कसैसँगको वैरभावको कुरै होइन । यो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतप्रतिको कुनै हाम्रो निहुँ खोजाइ हो र ? हाम्रो कुनै नचाहिने तर्क हो र ? हामीले नयाँ निकालेको विषय हो र ? हुँदै होइन । यो विषय अगाडिदेखि नै थियो । हामीले अलिकति चर्चा गर्दै आएका थियौं । तर, जब भारतले आँठौं संस्करण भनेर नक्सा निकाल्यो । त्यसमा हाम्रो जमिनसमेत सामेल गरेर निकालेपछि हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठायौं । यो हाम्रो जमिनसमेत समेटेर निकालिएको नक्सा उपयुक्त भएन, हामीलाई मान्य छैन र हामी यसको समाधान वार्ताद्धारा गर्न चाहन्छौं, अबिलम्ब वार्तामा बसौं भनेर भन्यौं । हामीले यस्तो सन्देश पठायौं । पाँच महिनासमम त्यसको जवाफ आएन । बरु आयो बाटो उद्घाटनको कुरा । फेरि हामीले पठायौं, यो उपयुक्त भएन हाम्रो भूमिमा बाटो बनाउने, उद्घाटन गर्ने, हाम्रो भूमिसमेतलाई प्रयोग गर्ने कुरा र बाटो बनाउने कार्य उपयुक्त भएन । हामी संवाद गरौं भन्यौं । लगातार हामीलसंवादबाट समाधान गर्न खोज्यौं । अझ हामीले नक्सा छाप्न पनि हतार गरेनौं । वार्ताबाटै समाधान गरौं, वार्तामै कुरा राखौं भन्यौं । वार्ताबाटै भइहाल्छ भने नक्सा छाप्नतिर नलागौं भनेर पर्खियौं । हामीले हतार गरेनौं । तर, त्यसको पनि जवाफ नआएपछि हामीले नक्सा छाप्यौं । नक्सा छापेपछि केहीले सम्बन्ध बिगा¥यो पनि भने । अनि के गर्नुपर्दथ्यो त ? हाम्रो जमिन छोडिदिनु पर्दथ्यो ? हाम्रो जमिन हामीले आफ्नो भोगचलनमा फिर्ता नल्याउने, त्यसलाई नक्सामा कायम नगर्ने, उतै भारतले नै प्रयोग गरोस्, किनभने मित्रराष्ट्र हो प्रयोग गरोस् न भन्नुपर्ने थियो त ? त्यत्रो विशाल भूमि भएको भारतले यति सानो हिमाली भेग जहाँ पाँचवटा गाउँ छन् । त्यसमध्ये तीनवटा गाउँ उता पारिएको छ । ती तीनवटा गाउँको कुरा मात्रै हामीले भन्यौं । ती तीनवटा गाउँ फिर्ता गरिदिन भनेका छौ । माथितिर त हिमाल छ, त्यो कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन । काली किनारका तीनवटा गाउँचाहिँ फिर्ता गरिदिनका लागि भनेका छौंं । यो कहाँ अर्घेल्याइँ भयो र ? कहाँ सम्बन्ध बिगार्न खोजेको छ र ? अलिकति भारतीय मिडियाले केही अनावश्यक ढंगले उछाल्ने काम गरेको हो ।
– मर्यादाका सीमाहरु केही उल्लंघन भए । यो मर्यादाका सीमाहरु, सभ्यताका सीमाहरु हाम्रोजस्तो एउटा समाज जहाँ आफ्नो सभ्यताप्रति हामी गौरव गछौं । हामी शिस्टता, मर्यादा र सत्यनिष्ठाप्रति गर्व गछौं । यस सभ्य समाजमा कति हुनुपर्दथ्यो, पर्दैन्थ्यो ? त्यस ढंगले कुराहरु आए पनि हामीले वार्ता गर्ने भन्यौं । त्यसले परिस्थिति धेरै बिगारिएको छ तर हाम्रो तर्फबाट बिगारिएको होइन । उतैका मिडियाले बिगारेको हो । त्यसो भएर संवाद केही विलम्ब भएको थियो । अगस्ट १५ मा मैले फोन गरेँ, कुराकानी भयो । अब एउटा नयाँ अध्याए सुरु भएको छ । हामी गम्भीरताका साथ वार्ता गर्छौं । आआफ्ना तर्फका प्रमाणहरु प्रस्तुत गछौं । जमिन हाम्रो हो । हामीले फिर्ता पाउनु पर्छ भनेकै छौं । हामीले फिर्ता लिनुपर्छ । यसमा सम्बन्ध बिग्रियो, बिगारियो भन्ने कुरा हुँदै होइन । यसमा भारतप्रति हाम्रो कुनै वैरभाव छैन, दुस्मनी पनि छैन् । कुनै नकारात्मकभाव पनि छैन्, दृष्टिकोण पनि त्यस्तो छैन । यत्ति हो जानेर नजानेर जसरी होस्, सन् १९६२ देखि हाम्रो भूभाग भारतले भोगचलन ग¥यो । त्यतिबेला युद्ध थियो । युद्धका बेलाचाहिँ सैनिक ल्यायो होला । तर अरुको भूभागमा त्यत्रो विशाल भारतले यति सानो देशको छेउको किनाराको थोरै भूभागप्रति जो हामीले सन् १८१५मा युद्ध हारेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ मिलाएर सीमाना निर्धारण गर्‍यौं । त्यसपछि पनि अनेक सीमानाका प्रश्नहरु आए । ती सीमानाका प्रश्नहरुले हाम्रो त्यो भूभाग कायम नै रहदै आयो । १४६ वर्ष मैले भने नि, हामीले त्यस भूमिको भोगचलन गरेकै हो ।
–इतिहासमा कहिल्यै कसैले बनाउनुपर्छ भन्ने पनि नसोचेको ठाउँमा अहिले काम भइरहेको अवस्था छ । जस्तोकि छाङरु–टिंकर जाने बाटो जो पहरै पहरा छ, त्यसलाई खोलेर अहिले बाटो बनाइदै छ । कम्पिलिट हुन अलिकति बाँकी छ । अझै अलिकति पूरा भएको छैन । बाटो बनाउन थालेपछि अब मान्छेहरु त्यहाँ जान सक्ने त भयो । त्यहाँ गएर तमासासँग फोटो खिच्ने, तमासासँग विरोध गर्ने, त्यहाँ कोही मान्छे उभ्याउने अनि यस्तो हालत छ, के हेर्‍यो सरकारले भन्ने गरेको पाइन्छ । अहिलेको सरकारले त के गर्‍यो भन्ने होइन, बाटो बनाउँदै छ, अहिलेको सरकारले बाटो बनायो । अहिलेसम्म त कसैले त्यहाँ बाटो बनाएको थिएन । अहिलेको सरकारले बाटो बनायो, राम्रो गर्न खोजिराखेको छ, हेलिकप्टरबाट खाद्यान्य पुर्‍याएको छ । अहिलेको सरकारले त हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्य पुर्‍याइराखेको छ । आवश्यक सामग्रीहरुको आपूर्ति हेलिकप्टरबाट पुर्‍याएको छ । केही अनुदानस्वरुप, केही अत्यन्त सस्तो मूल्यमा त्यसरी उपलब्ध गराएको छ । यो त पोजिटिभ कुरा हो भनेर देख्न पर्‍यो नि ! अनि यस्तोमा पनि विरोध गर्ने केही छन् । विरोधका लागि विरोध गर्ने ? सरकारले राम्रो काम गरिराखेको छ, काम राम्ररी नै गरिराखेको छ । नेपाली सेनाले त्यस्तो पहरामा ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिराखेको छ । धन्यवादको एकशब्द छैन । अहिलेको सरकारले गर्न थालेको छ, सेनाले यसरी गरिराखेको छ यस्तो पहरामा हामी त जान सक्दैनौं, सेना पनि त मान्छे हुन् । उनीहरुको पनि ज्यान नै हो । त्यहाँबाट फिस्लिक्क गयो भने त ऊ पनि तल महाकालीमा खस्छ । ज्यान भेटिदैन । हाडखोर केही बाँकी रहदैनन् । धुजाधुजा हुन्छन् । सेनाले त्यसरी काम गरिराखेको छ भने त्यसप्रति कृतज्ञताभाव हुनुपर्दैन ? गर्दैछ यसरी भन्नु पर्दैन ? त्यो देखाउनु पर्दैन ? यसरी गरेको छ, यसरी गरेको छ भनेर समाचार दिनुपर्दैन ? अनि खिचेर त्यहाँको भीर देखाउने ? यो प्रवृत्ति हावी छ । सरकारले राम्रो काम गरेको छ, यस्ता प्रतिकूलताहरुको सामना गरेको छ । त्यसको कुनै चर्चा नगर्ने ? अनि त्यसलाई नराम्रो ढंगले चित्रण गर्ने ? अहिले बाटो बनेको छ, अब यसको विरोध छ, बाटो अझै बनिसकेको त छैन । काम थाल्ने बित्तिकै बाटो बन्छ त ? बन्दैछ नि !
तपाईं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सबैभन्दा बढी संवाद गर्ने प्रधानमन्त्री हो, मैले चिनेको केपी शर्मा ओली । अब तपाईंहरुको बीचमा राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, दुवै प्रधानमन्त्रीको बीचमा ?
– राम्रो छँदैछ ।
– हामी एकातिरबाट निर्देशित, अर्कातिरबाट अतिनिर्देशित, एकातिर निकट, अर्काेतिर दूरी भन्ने स्थितिमा छैनौं । हामी दुबै छिमेकीसँग असाध्यै राम्रो र सुमधुर सम्बन्ध छ । यस सम्बन्धमा कहीँकतै समस्या देखापर्‍यो भने त्यसको समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौं । र, समस्यारहित सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं ।
अब नियुक्तिलाई लिएर विवाद सुरु भयो । सरकारले विचौलियाहरुलाई नियुक्ति गर्‍यो, नातावाद, क्रिपावाद गरेर कुटम्बहरुलाई ल्यायो । यसको चौतर्फी आलोचना भयो नि ! सरकारले पछिल्लो समयमा नियुक्तिमा एउटा मापदण्ड बनाउन पर्दैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ? संवैधानिक नियुक्ति पनि हुँदैछन् धमाधम ?
– मेरो नाताको को पर्‍यो ? तपाईंले यत्रो हल्ला सुन्नुभएको रहेछ नातावाद, क्रिपावाद भयो भनेर म तपाईंलाई सोध्न चाहन्छु, मेरो नाताको को प¥यो ? को नियुक्त भयो नाताको ? को अयोग्य मान्छे, योग्यता नपुगेको र क्षमता नपुगेको मान्छे कहाँ पुग्यो ? को प्रतिस्पर्धाबिना गयो ? प्रतिस्पर्धाबिना को त्यहाँ गयो ? छनोटबिना को गयो ? यस्ता हल्लाहरु आपूm परिनँ भन्ने, आफ्नो मान्छे परेन भन्नेहरुले बढी गरेका छन् । तर जस्तो मान्छे भएपनि आफ्नो पर्नुपर्ने कुरा हुँदैन । कम्पिटिसन हुन्छ र लड्नुपर्छ, कम्पिटिसनमा उत्तिर्ण हुनुपर्छ । अब्बल ठहरिनु पर्छ र नियुक्ति लिनुपर्छ ।
त्यसो भए नियुक्तिमा मापदण्ड पुर्‍याएर गरिन्छ अब ? क्षमतावान मान्छेलाई ल्याइन्छ ?
– उहाँको सम्धी उहिले पीएचडी गरेर प्रोफेसर र भीसी हुन पुग्नुभएको थियो । सम्धी हुनुभन्दा धेरै वर्ष अघि पीएचडी गरेको हो नि ! सम्धी हुनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि प्राध्यापक भएको हो । प्राडा भएको सम्धी भएपछि त होइन । सानैँ उमेरमा प्रोफेसर हुनेमध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ होला । उहाँ कम्पिटिसनमा लडेर आउनु भएको होला । अनि ईश्वर पोखरेलसँग जोड्नुपर्ने कारण के भयो त्यसमा ? यदि तपाईंको कोही मान्छे राम्रो फोटोग्राफर छ, राम्रो इन्टरभ्यू लिन जान्दछ, अरु प्रोग्रामहरु राम्रो चलाउन जान्दछ । र, तपाईंको मान्छे कुनै मिडियामा गयो भने ऋषि धमलाको नाता भएको हुनाले गयो भनिदिने ? क्षमताअनुसार व्याचलर चाहिने छ भने उसले व्याचलर गरेको हुनुपर्छ । ऋषि धमलाको मान्छे भएर जान त पाउँदैन । मास्टर्स गरेको आवश्यक छ भने मास्टर्स गरेको नै हुनुपर्‍यो । त्यो पनि कम्पिटिसन गरेर जानु पर्‍यो । अनि त्यसो गर्दा ऋषि धमलाको मान्छे पर्‍यो भने के गर्ने त ? नातावाद भयो, क्रिपावाद भयो र ऋषि धमलाको मान्छे पर्‍यो भन्ने ? अँ, यत्तिचाहिँ हो, आफ्नो मान्छे कम्पिटिसनमा छ भने मेरो मान्छे पनि कम्पिटिसनमा आयो, त्यसकारण म यो जाँचकीमा बस्दिनँ, मूल्याङ्कन समितिमा बस्दिनँ, छनोट समितिमा बस्दिनँ । किनभने, मेरो मान्छे पनि यसमा सहभागी भयो, अर्को समिति बनाउनुस् । म जाँचकीबाट राजीनामा गर्छु भनेर तपाईंले छोड्नु पर्छ । तर, प्रतिस्पर्धा गर्ने उसको हकलाई तपाईं जाँचकीका निमित छोडिदिनुस् न ! तपाईं मूल्याङ्कनकर्ताको रुपमा छोड्नुस् न ! तर, उसको प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने र पाउने हकलाई तपाईँ कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ ?
एउटा चक्रवात आँधी आयो र ८७९ घरहरु उडाइदियो । तुरुन्त नेपाली सेनालाई लगाएर घर बनाएर हस्तान्तरण गरिएको छ । यो तपाईँले के नेपालमा परिकल्पना गर्नसक्ने कुरा हो ? तत्काल उनीहरुका छाप्रा थिए भने पक्की घर पाए । यो त तपाईंले देख्नुभएको छ । यो दुई अढाई वर्षको बीचमा हामीले कतिवटा सुरक्षित बस्ती विकास गरेका छौं, त्यो हेर्नु पर्‍यो । बीचमा त पुनःनिर्माणको काम त्यति भएको थिएन । यो दुई अढाई वर्षको बीचमा ७ लाख त घरहरु बनाएर हस्तान्तरण गरिएको छ । यो ठट्टाको विषय हो ? पहिलो कार्यकाल मैले छाड्दा जहाँ थियो, फेरि आउँदा धरहरा जस्ताको तस्तै धुँलोमै थियो । रानीपोखरी पहिलेको सरकारले शिलन्यास गरेर मात्रै छाड्यो । शिलन्यासको ढुंगा जहाँको त्यहीँ रह्यो । त्यत्तिकै रह्यो । फेरि म सरकार आएर काम अघि बढाएँ, अब केही दि भित्र रानीपोखरी निर्माण भइसक्छ । बसन्तपुरमा तपाईं गएर कार्यप्रगति हेर्न सक्नुहुन्छ । निर्माण कार्य कसरी भएको छ ? अरु हेर्न सक्नुहुन्छ संसद भवनको निर्माण कार्य कसरी भएको छ ? हेर्न सक्नहुन्छ ।
भ्रष्टाचारको बढी हल्ला
भ्रष्टाचार गर्‍यो भनेर विपक्षीहरुले भनेका छन् ?
तर, १३ अर्ब रुपिया खर्च भयो नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो कहाँकहाँ खर्च भयो भन्ने त आउनुपर्‍यो जनतासमक्ष ?
– होइन, आउँछ त । नेपालमा लेखाप्रणाली छैन ? त्यति थाहा छैन ? जतिबेला भन्यो त्यतिबेला हिसाबै मात्र गरेर बसिरहन्छ कि क्या हो सरकार ? लेखा सिस्टमअनुसार भौचर, बिल अनेक चिज राखेको हुन्छ । ती सबै राखेर उपयुक्त समयमा त्यसको छानबिन हुन्छ । व्यवस्थित लेखा राखिन्छ । आन्तरिक लेखाबाहेक महालेखाले त्यसलाई हेर्छ । बेरुजु हेर्छ । कस्तो बेरुजु हो भनेर सरकारले छानबिन गर्छ । त्यो त पार्लिायामेन्टमा समेत प्रस्तुत हुन्छ । पार्लामेन्टको सम्बन्धित समितिले त्यसलाई हेर्छ । अनि कस्तो बेरुजु हो ? असुलउपुर गराउनुपर्ने बेरुजु हो भने असुलउपुर गराउनू भनेर तोकिएको हुन्छ । त्यसलाई फेरि छानबिन गरेर फेरि कारबाही चलाइन्छ । भ्रष्टाचार छदैछैन होला भित्रभित्र म त्यो भन्दिनँ । तर, जहाँ आशंका छ, त्यहाँ छानबिन गराइएको छ र कारबाही हुन्छ । भ्रष्टाचारले देश विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ ।
– रिस उठेपछि जे पनि बोल्नुचाहिँ लोकतन्त्रको दुरुपयोग हो । यसो गर्नु बेग्लै कुरा हो । नत्रभने कोही कसैले पनि अनियमितता गरेको छ भने, भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यो जोसुकै भएपनि छाडिन्न । कारबाहीको भागीदार हुन्छ । यो त मैले भनिआएको छु । कारबाही चलिराखेको छ । छानबिन भइराखेको छ । हरेक कुराको छानबिन गराइराखेको छु । त्यसभन्दा बढी चाहिँ के गर्ने ? कसैले भन्यो भन्दैमा च्याप्प समातेर झ्यालखाना हाल्ने कुरा त हुँदैन होला । त्यसको छानबिन गराउनु प¥यो, उपयुक्त निकायले छानबिन गर्नुपर्‍यो । अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्‍यो, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अन्य निकायहरु छन् । तिनीहरुले पनि गर्नुपर्‍यो । आन्तरिक रुपमा हामीहरुले समिति बनाएर पनि छानबिन गछौं । त्यस छानबिनले के देखाउँछ ? त्यो हेछौं । केही मान्छेहरुक लागि अखबारमा छाप्ने कुरा हुँदैन, अनि केही न केही त छाप्नु पर्‍यो ! पपुलिस्ट हुनका लागि केही त उछाल्नु पर्‍यो । सरकार त्यस्ता कुराको पछाडि लागेर त हुँदैन ।
– ओम्नी भनेको कहाँको हो ? के हो ? त्यो मैले एउटा पत्रिका पढेर एउटा ओम्नी भन्ने थाहा पाएँ । र, ओम्नीसँग मलाई जोडेको मैले सुनेँ, देखेँ र पढेँ पनि । अब केही संचारमाध्यमहरु, सोसल मिडिया संचालकहरु, जसको कामै त्यस्तै प्रकारको छ । तिनलाई सत्यसँग मतलब होइन । तिनीहरु लोकतन्त्रको दुरुपयोग गरेर, अनुचित ढंगले जनतामा अफवाह फिजाउने, भ्रम फिजाउने, जनतालाई वर्गेल्याउने, अल्मल्याउने र जनतालाई सही कुरा बुझ्न नदिने खेतीमा लागेका छन् । त्यो जनताले बुझ्दै पनि जान्छन् र त्यस्ता आरोपलाई भोलि एउटा समयमा ती पढ्न पनि लायक छैनन् भनेर मान्छेले पढ्न पनि छोड्ने स्थिति बन्छ । किनभने, जनता अलिक समय भ्रममा पर्लान्, तर जनता सधै सत्य जान्न चाहन्छन् । सत्य बुझ्न चाहन्छन् । भ्रममा पारेका कुराहरुको पछाडि जनता सधैंँ लाग्दैनन् । तसर्थः संरक्षण गर्छ भनेर कसैलाई मन परेन भने भ्रष्ट भइहाल्यो भन्ने कुरा होइन । केही अनैतिक तत्वहरुले यस्तो अनेकथरी प्रचार छापेका र चलाएका छन् । मैले कम्बोडियामा लगेर दूरसंचार कम्पनीमा इन्भेष्ट गरेको छु अरे, स्वीस बैंकमा खाता खोलेर कति करोड डलर त्यहाँ राखेको छु रे । यस्ता खालका तत्वहरुसँग त मलाई दया लाग्छ । ती कोद्वारा संचालित हुन्, कसको लागि काम गर्छन ? देशमा कोही इमान्दार छ, कसैको मर्यादा छ भन्ने भन्दा सबै चोर हुन् भन्ने, सबै भ्रष्ट हुन भन्ने अथवा यो देशप्रति अनास्था फैलाउने, यो देश चोखो छ, यस देशकी धर्ती माताले यस देशले चोखो सन्तान पनि जन्माउँछिन भन्ने कुराप्रतिको विश्वास हटाउने काम तिनले गरिरहेका छन् । । कोही पनि चोखो, देशप्रति माया भएको र निष्ठा भएको मान्छे यस देशमा छ भन्ने कुरा हटाउने र हरेकलाई अपमान गर्ने, बदनाम गर्ने, स्याडिस्ट क्यारेक्टर बोकेर अर्कालाई दुःख दिने, अर्काको अपमान गर्ने र अर्कालाई दुःख पु¥याउँदा आनन्द मान्ने यस प्रवृतिका व्यक्तिहरु छन् । तिनीहरुको पापचाहिँ कुनैबेला धुरीबाट कराउँछ । धुरीबाट पाप कसरी कराउँछ ? त्यो हेर्नुपर्छ । कराउन चाहिँ कराउँछ ।
– हँ हँ..कहानेर ? अधिनायकवाद कहाँनेर भयो ? चुनाव भएन ? आवधिक चुनाव गराइएन ? पावरमै रहन खोजियो ? विरोधमा अलिकति कसैले टिप्पणी ग¥यो भने त्यसलाई जेल हालियो ? वा केही गरियो ? अथवा अधिनायकवाद भनेको कहाँ भयो ? कसैलाई मन परेन अनि अधिनायकवाद ? चुनाव अगाडि नै अब अधिनायकवाद आउने भयो भनेर एउटा यस्तो हल्लाखल्ला र रुवावासी थियो । आपूm सरकारमा नभएपछि अधिनायकवाद हुन्छ भन्ने मान्यताअन्तर्गत यसो गरिएको छ । यसप्रकारका अभिव्यक्तिका पछाडि मलाई जानु छैन । तर, म गम्भीरताका साथ भन्न चाहन्छु, हामी वास्तविक जनताको लोकतन्त्रका पक्षमा छौं । अघि मैले भनें जनताले बाँच्न पाउने जनताको अधिकार हो । टाठाबाठाहरुको तथाकथित स्वतन्त्रताभन्दा जनताको बाँच्न पाउने अधिकारतर्फ मेरो धेरै ध्यान छ । मैले भनें सडक बालबालिकाको उद्दार गर्नु र तिनीहरुलाई मानवीय जीवन दिनु, तिनीहरुलाई अभिभावकत्व दिएर रेखदेख, खाना, शिक्षाको प्रबन्ध गर्नु यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, मानवअधिकारका नाममा के यस दिशामा कोही बोल्छ ? बोलेको छ ? वा सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भन्छ ? या यस कुराको प्रशंसा त छाडिदिऔं उच्चारणसम्म गर्ने हिम्मत गर्छ ? यो त केही छैन । लोकतन्त्र कसैको लहडबाजी होइन । लोकतन्त्र कसैको व्यक्तिगत सत्तास्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम पनि होइन र हुन सक्दैन । लोकतन्त्र जनताको सार्वभौमसत्ताको रक्षा र प्रयोग हो । जनताका हितहरुमा केन्द्रीत सबैभन्दा पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली । लोकतन्त्रलाई हामीले जीवन पद्धतिका रुपमा विकास र अभ्यास गर्र्छौ । लोकतन्त्र व्यक्ति वा समूहको स्वार्थसिद्धिका निम्ति गानाबजाना होइन ।
– नेपालको संविधान कार्यान्वयनको हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं । यो अगाडि बढ्दै जान्छ । र, मैले भनेको छु, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानको संशोधन हुने गर्छ, जस्तोकि अस्ति भयो । सर्वसम्मतिले भयो । हामी यसैगरी आवश्यकता पर्‍यो भने संविधान संशोधन गर्न पनि सक्छौं । यसरी आवश्यक पर्दा सर्वसम्मतिका साथ जान सक्दारहेछौं नि ! संविधान संशोधन गर्नै मान्दैन, एक अक्षर, कमा र फुलस्टप पनि फेर्नुहुँदैन भन्योआदि हल्ला गर्दथे । मैले नै प्रस्ताव लगेर सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो त ! तसर्थः पहिले पनि संविधान संशोधन भएको थियो, अहिले पनि संविधान संशोधन सर्वसम्मतिले भयो । मुख्य कुरा त देश हो । मुख्य कुरा त जनता हो । यी कुनै कुराप्रति अनावश्यक बफादारिता, प्रतिवद्धता र धर्म भाकिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । हजारपल्ट कायलनामा गर्नुपर्नेजस्तो गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । यो प्रणाली देश र जनताको लागि हामीले ल्याएको प्रणाली हो । यस प्रणालीलाई हामी सुदृढ गर्दै अझै अघि बढेर देशका लागि, जनताका लागि, विकासका लागि उपयोगी हुने र बनाउने कोशिसमा छौं । हो, यस ढंगले यसको सदुपयोग र अभ्यास गर्दै हामी अगाडि बढ्छौं ।